सस्तो र प्रशोधित खानाले आयु घटाउने खतरा
भुक्तभोगीहरुको अनुभवले भन्छ– सस्तो र प्रशोधित खानाले मानिसलाई मोटो बनाउँछ । प्रशोधित खानेकुरा कम प्रयोगले मानिसको जीवन स्वस्थ्य त हुन्छ नै आयु पनि बढाउँछ ।
मानिसले डायटिङ्ग अधिक मात्रामा गर्ने गर्छन् । पहिले त उनीहरु प्रशोधित क्यालोरी मिसिएका खानाहरु बेस्सरी खाने गर्छन् र आफैं आफ्नो मोटो शरीर देखेर तर्सन्छन् ।
सेलमेटाबोलिजम भन्ने जर्नलमा दिइएको जानकारी अनुसार, प्रशोधित खानेकुरा जस्तै हाइड्रोजेनेटेड तेल, मकैको सर्वत, मिश्रित गरम मसलाहरु मानिसको भान्साघरमा अनावश्यक परिमाणमा थुपारिएको हुन्छ । यो टेलिभिजन विज्ञापनको नक्कल गर्दा त्यस्ता धेरै सामग्री सुटुक्क भान्सामा पसेका हुन् ।
एउटा अध्ययनमा २० जना कर्मचारीहरुलाई नेशनल हेल्थ इन्स्टिच्युटमा खटाइयो । १४ दिनका लागि उनीहरुलाई खानाहरु जाच्न दिइयो । खानामा क्यालोरी, चिनी, रेशा तथा कार्बोहाइड्रेट पाइयो । केरा, बदाम, तर झिकिएको दुध, चिज त्यहाँ पाइयो । सहभागीहरुले रिसर्चका लागि दिनभर काम गरेका थिए । उनीहरुले परीक्षण सकेपछि आफ्नो रिपोर्टमा लेखे– प्रशोधित खानामा बढि क्यालोरि हुनेहुनाले मानिस धेरै मोटाएका हुन्, जुन स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ ।
प्रशोधित डायटबाट ५०० क्यालोरि शक्ति प्रति दिन पाइन्छ । त्यस्तै अप्रषोधित खानेकुरामा पनि मानिसले धेरै मात्रामा कार्बोहाइडे«ट र फ्याट पाउँछन् । प्रशोधन नगरिएको खानेकुराको तौल पनि त्यतिकै मात्रामा त हो नी !
कतिपय अभिभावकले सोच्छन्,आफूले छोराछोरीको जीवनमा तरकारी र फलफूल आवश्यक मात्रामा दिन सकिन भने आफू गलत ठहरिने हो कि ? बढि प्रशोधित र तयारी खाना स्वादमा त मीठो हुन्छन् तर प्राकृतिक खाना भन्दा बढि महँगो हुने बताइएको छ ।
प्रशोधित खानामा खाजा, भोजन र तयारी खाना सबै पर्छन् । दशकौं देखि मानिस त्यस्ता खाने कुरा खान अभ्यस्त भैसकेका छन् । अमेरिकामा ६१ प्रतिशत वयस्क, क्यानडामा ६२ प्रतिशत र बेलायतमा ६३ प्रतिशत मानिसले प्रशोधित खानेकुरा खाने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
यस्ता प्रशोधित खानाले मानिसमा मोटोपन, उच्च रक्त चाप र क्यान्सर जस्ता रोगहरु बढि मात्रामा फैलने संकेत देखिएको छ ।
रुटगर्स विश्वविद्यालयका न्युट्रिसियानिष्ट नुर्गल फिद्जरल्याण्ड भन्छन्,“कुनै पनि कुरा छिटो गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच छिटो खानु हाम्रो लागि वाध्यता भएको हो ।”
तयारी खानेकुरा खानु अगाडि के के समिश्रण खानेकुरामा पाइन्छ हेर्ने गर्नु पर्ने तर्क फिद्जरल्याण्डको छ । उनी मानिसले समिश्रण के के हो प्रस्टसँग बुझनुपर्ने सुझाव दिन्छिन्।
विश्लेषणकहरुले लेखेका छन् ,“कुन डायट खाने भन्ने आफैंमा द्वन्दको कुरा हो । कार्वोहाइड्रेट, पलियो, धेरै प्रोटीन मिसिएको, कम चिल्लो रहित खाने कुरा, विरुवा युत्त, भेगनहरु यस्ता डायट हुन जसले मानिसमा र पोषण विज्ञानमा भ्रम श्रृजना गर्छ । मोटोपन कम गर्न र उपचार गर्न तपाई कम प्रशोधन गरिएको खाना खाने गर्नुहोस ।” (एजेन्सीको सहयोगमा)
२०७६ जेठ १२ आइतबार १६:२१:०० मा प्रकाशित